Efesofo 2 NA-TWI - Kristo mu nkwagye yɛ adom - Kan no, - Bible Gateway
Efesofo 1Efesofo 3
Efesofo 2 Nkwa Asem (NA-TWI)
2 Kan no, esiane mo asoɔden ne mo bɔne nti, na moawuwu wɔ honhom mu. 2 Saa bere no na mudi bɔne a ɛwɔ wiase no akyi. Mutiee nea odi wim atumfo so a ɛnnɛ yi ɔno na odi wɔn a wontie Onyankopɔn asɛm no so no. 3 Nokwarem, na yɛn nyinaa te sɛ wɔn na yɛtenaa ase maa yɛn ho, yɛɛ nea yɛpɛ sɛ yɛyɛ biara. Yɛn nso na ɛsɛ sɛ Onyankopɔn abufuw ba yɛn so saa ara.